Carraan Kondomiiniyemii bulchiinsi magaalaa Finfinnee har’a baase mormii cimaa kaase - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Carraan Kondomiiniyemii bulchiinsi magaalaa Finfinnee har’a baase mormii cimaa kaase
Carraan Kondomiiniyemii bulchiinsi magaalaa Finfinnee har’a baase mormii cimaa kaase
Naannoo Oromiyaa magaalota gara garaa keessatti ummanni, daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin alatti kondomiiniyeemota ijaaraman irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee carraa baase mormuun hiriira nagayaa geggeessan. Kanaan duras mootummaan maqaa misoomaatiin qotee bultoota naannawa magaalaa Finfinneetti argaman lafa isaanii irraa buqqisuu hordofuun, mormiin ummataa kan ka’e tahuu ni yaadatama. Haata’u malee jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti mul’ateen dhimmichi furmaata ni argata jedhamee eegamus, ammas miidhan qotee bultoota irra gahaa jiraatuu odeeyfannoon ni addeessa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee har’a waaree booda Hoteela Kontineentaalitti manneen Kondomiiniyemii lafa qotee bultoonni irraa buqqifaman irratti ijaaraman 51,229 tahan carraa kan baase yoo tahu, maneen kana jidduu immoo muraasa qotee bultoota lafa isaanii irraa buqqifamaniif osoo carraa hin kaasin kan keenne tahuu ibse.
Itti aanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Takkallee Ummaa sirna carraa baasuu kana irratti haasaya godheen, “qonnaan bultootaa fi ilmaan isaanii sababii misoomaatiin buqqa’aniif carraan dursa kennamee jira” jedhe.
Aktiivistii fi Daayrektarri Oromiyaa Miidiyaa Network Obbo Jawaar Muhammad immoo barreeffama fula fesbuka isaa irratti maxxanseen, Carraan manneen Kondomiiniyemii hardha bahee seeraan ala fi ijaarsi manneen saniitu seeraan ala tahuu ibsuun, ummanni mirga isaatiif akka falmu waamicha dabarse.
Hasan Jawaaro says:
Aswrb Akkam jirtan warra nuural hudaa hundi keessan jazaakallaahu keeyraa olomaa’ota keenyah hundaa Rabbiin jazaakeeyrii isiniihaadeebi’u
jemal mohaba says:
as wr jazaa kallaah keyran
lenco qadii says:
bate bayyise garu midian kessan saganta redio yerro tamsasu live osso tahe baye filatamdha
samira Jamana says:
sumayaa Sh/Tamam says:
ajibu musa says:
May 30, 2020 sa;aa 11:24 am Update tahe